भ्लादिमिर लेनिन - विकिपिडिया
(व्लादिमीर लेनिन बाट पठाईएको)
३० डिसेम्बर १९२२ – २१ जनवरी १९२४
८ नोभेम्बर १९१७ – २१ जनवरी १९२४
भ्लादिमिर इल्यिच उल्यानोभ लेनिन
(१८७०-०४-२२)२२ अप्रिल १८७०
Simbirsk, रूसी साम्राज्य
२१ जनवरी १९२४(१९२४-०१-२१) (५३ वर्ष)
Gorki, Moscow Governorate, Russian SFSR, सोभियत सङ्घ
लेनिन स्मारक, मस्को, रुस
भ्लादिमिर इलिच लेनिन (१८७०-१९२४) रूसमा बोल्सेविक क्रान्तिको नेता तथा रूसमा साम्यवादी शासनको संस्थापक थिए ।
१ सुरुवात जीवन
३ अक्टोबर क्रान्ति
४ लेनिन उपनाम कसरी रह्यो ?
लेनिनकी आमा मारिया अलेक्सान्द्रभ्ना डाक्टरकी छोरी थिइन् । घरमै शिक्षा पाएकी उनी थुप्रै बिदेशी भाषाका ज्ञाता थिइन् । त्यस्तै साहित्य र सङ्गितप्रति सौखिन, दृढ स्वभाव, शान्त, मिलनसार, बुद्धिमान र दृढ निश्चयी पनि थिइन् । लेनिनका पिता त्यस समयका प्रगतिशील विचार राख्ने व्यक्ति थिए । उनले रुसी जनसाधारणका बीचमा शिक्षा प्रचार गर्ने, गाउँहरूमा स्कुल स्थापना गर्ने र भोल्गा तटवर्ती क्षेत्रहरूमा बस्ने गैररुसी जनजातिहरूको शिक्षादीक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका थिए । उनीहरूका आन्ना, अलेक्सान्दर, भ्लादिमिर, ओल्गा, दिमत्री र मारिया गरी ६ सन्तान थिए । उल्यानोभ दम्पतीले आफ्ना सन्तानहरूलाई बहुपक्षीय शिक्षा दिए । यसका साथसाथै उनीहरूले आफ्ना सन्तानलाई परिश्रमी, इमान्दार, सुशील, अनुशासित र कर्तव्यपरायण बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गरे ।
संयोग नै मान्नुपर्छ कि, उल्यानोभ दम्पतीका सबै छोराछोरी पछि गएर क्रान्तिकारी बने केटाकेटी छँदैदेखि नै लेनिन साहसी, प्रफुल्ल, ठट्यौली वर मिजासका थिए । उनी पौडी खेल्न र स्केटिङ गर्नमा असाध्यै रुचि राख्थे । पाँच वर्षको उमेरमा नै उनले लेखपढ गर्न सिकिसकेका थिए । नौ वर्षको उमेरमा सिम्बिस्र्क जिम्नेसियमको पहिलो दर्जामा भर्ना भए । असाधारण प्रतिभाका धनी लेनिन कक्षामा सधैँ प्रथम हुन्थे । आफ्ना सहपाठीहरूलाई सधैँ मद्दत गर्थे र कठिन विषयहरूमा उनीहरूलाई सहयोग गर्न अग्रसर हुन्थे ।
व्लादिमीर इलीइच लेनिनको जन्म सिंविर्स्क नामक स्थानमा भएको थियो र उनको वास्तविक नाम "उल्यानोव" थियो। त्यसका पिता विद्यालहरूको निरीक्षक थियो जसको झुकाव लोकतन्त्रात्मक विचारहरूको तर्फ थियो। उनकी माता, जो एक चिकित्सककी छोरी थियो, सुशिक्षित महिला थिइन्। सन् १८८६मा पिताको मृत्यु भएपछि धेरै छोरा-छोरी भएको ठूलो परिवारको सारा बोझ लेनिनकी मातामाथि पर्‍यो। यी भाइ बहिनी प्रारम्भबाट नैं क्रांतिवादका अनुयायी बन्दै गए। ठूला भाइ अलेक्ज्याण्डरलाई जारको हत्याको षडयंत्र रचेको आरोपमा फाँसी दिइयो। उच्च योग्यताका साथ स्नातक बन्नमा लेनिनले १८८७मा कजान विश्वविद्यालयका विधि विभागमा प्रवेश गरे किंतु शीघ्र नैं विद्यार्थीहरूका क्रान्तिकारी प्रदर्शनमा हिस्सा लिनको कारण विश्वविद्यालयले निष्कासित गरिदियो। सन् १८८९ मा उनी समारा गइरहेको बेला उनले स्थानीय मार्क्सवादीहरूको एक मण्डलीको सँगटन गरे। १८९१ मा सहरूट पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालयबाट विधि परीक्षामा उपाधि प्राप्त गर लेनिनले समारामा नैं वकालत गर्नु आरभ गर दिया। १८९३ मा त्यसले सहरूट पीटर्सबर्गलाई आफ्नो निवासस्थान बनाया। शीघ्र नैं उ वहाँका मार्क्सवादिहरूको बहुमान्य नेता बने। यहीं सुश्री क्रूप्सकायासित, जो श्रमिकहरूमा क्रांतिको प्रचार गर्नमा संलग्न थिई, उनको परिचय भयो। यसका पछि लेनिनको क्रान्तिकारी संघर्षमा जीवन पर्यंन्त उसको घनिष्ठ सहयोग प्राप्त भइरह्यो।
सन् १८९५ मा लेनिनलाई बन्दीगृहमा हालियो र १८९७ मा तीन वर्षका लागि पूर्वी साइबेरियाका एक स्थानमा निर्वासित गरियो। केही समय पछि क्रूप्सकायालाई पनि निर्वासित भएर वहाँ जानु पर्‍यो त्यसपछि लेनिनसित उसको विवाह भयो। निर्वासनमा रहँदा लेनिनले तीस पुस्तकहरू लेखे, जसमध्ये एक थियो ""रूसमा पूँजीवादको विकास""। यसमा मार्क्सवादी सिद्धांतहरूका आधारमा रूसको आर्थिक उन्नतिका विश्लेषणको प्रयत्न गरिएको। यहीं उनले आफ्नो मनमा रूसका निर्धन श्रमिकहरू वा सर्वहारा वर्गको एक दल स्थापित गर्ने योजना बनाए।
सन् १९००मा निर्वासनबाट फर्की आउनमा एक समाचारपत्र स्थापित गर्नका उद्देश्यले उनले धेरै नगरहरूको यात्रा गरे ग्रीष्म ऋतुमा उनी रूसका बाहिर गए त्यहींबाट उनले "इस्क्रा" (चिनगारी) नामक समाचारपत्रको सम्पादन आरम्भ गरे। यसमा त्यसको साथ ""श्रमिकहरूको मुक्ति""का लागि प्रयत्न गरने भएका ती रूसी मार्क्सवादी पनि थिए जसलाई जारशाहीका अत्याचारहरूबाट उत्पीडित भएर देशका बाहिर रहनु परेको थियो। १९०२मा त्यसले ""हमा के गर्नु छ"" शीर्षक पुस्तक तैयारको जसमा यस कुरामा जोर दिया कि क्रांतिको नेतृत्व यस्ता अनुशासित दलका हाथमा हुनुपर्दछ जसको मुख्य कामकाज नैं क्रांतिका लागि उद्योग गर्नु छ। सन् १९०३ मा रूसी श्रमिकहरूका समाजवादी लोकतन्त्र दलको अर्को सम्मेलन हुने/भयो। यसमा लेनिन तथा त्यसको समर्थकहरूलाई अवसरवादी तत्वहरूबाट कडा फलाम लेना पडा। अंतमा क्रान्तिकारी योजनाका प्रस्ताव बहुमतबाट मंजूर भयो र रूसी समाजवादी लोकतन्त्र दल दुइ शाखाहरूमा विभक्त भयो - क्रांतिको वास्तविक समर्थक बोलशेविक समूह र अवसरवादी माशेविकहरूको गिरोह।
प्रथम रूसी क्रांतिका विफल भएपछि लेनिनलाई फेरि देशबाट बाहिर निर्वाशीत हुन पर्यो। जनवरी, १९१२मा सर्व रूसी दलको सम्मेलन प्रागमा हुने/भयो। लेनिनका निदेशबाट सम्मेलनले क्रान्तिकारी समाजवादी लोकतन्त्र दलबाट मेनशेविकहरूलाई निकाल बाहर गरे। यसका पछि लेनिनका क्रैको नामक स्थानमा रहकर दलका पत्र "प्रावदा"को सञ्चालन गरने, त्यसको लागि लेख लिखने र चौथो राज्य ड्यूमाका बोलशेविक दलको निदेशन गर्नमा आफ्नो तपाईँलाई लगाया।
सन् १९१३-१४ मा लेनिनले दुइ पुस्तकहरू लिखीं - "राष्ट्रियताका प्रश्नमा समीक्षात्मक "विचार" तथा (राष्ट्रो का) आत्मनिर्णय गर्ने अधिकार।" पहलीमा त्यसले बूर्ज्वा मानिसहरूका राष्ट्रवादको तीव्र आलोचनाको र श्रमिकहरूको अंतरराष्ट्रियताका सिद्धांतहरूको समर्थन गरे। अर्कोमा त्यसले यो माँगको कि आफ्नो भविष्यको निर्णय गर्ने राष्ट्रहरूको अधिकार मान लिया जाए। त्यसले यस कुरामा बल दिया कि गुलामीबाट छुटकारा पाने प्रयत्न गरनेभएका देशहरूको सहायताको जाए।
प्रथम महासमरका समयमा लेनिनका नेतृत्वमा रूसी साम्यवादिहरूले सर्वहारा वर्गको अंतरराष्ट्रियता का, "साम्राज्यवादी" युद्धका विरोध का, झण्डा माथि उठाया। युद्धकालमा त्यसले मार्क्सवादको दार्शनिक विचारधारालाई र अघि बढाने प्रयत्न गरे। त्यसले आफ्नो पुस्तक "साम्राज्यवाद" (१९१६) मा साम्राज्यवादको विश्लेषण गर्दै बतलाया कि यो पूँजीवादका विकासको चरम र आखिरी मंजिल छ। त्यसले उन परिस्थितिहरूमा पनि प्रकाश डाला जो साम्राज्यवादका विनाशका अनिवार्य बना दे्दछं। त्यसले यो स्पष्ट गर दिया कि साम्राज्यवादका युगमा पूँजीवादका आर्थिक एवं राजनीतिक विकासको गति सब देशहरूमा एक सी छैनती। यसै आधारमा त्यसले यो निष्पत्ति निकाली कि शुरू शुरूमा समाजवादको विजय पृथक् रूपबाट केवल दुई तीन, वा मात्र एक ही, पूँजीवादी देशमा संभव छ। यसको प्रतिपादन त्यसले आफ्नो दुई पुस्तकहरूमा गरे - "दि यूनाइटेड स्टेट्स अफ यूरोप स्मानिसन" (१९१५) तथा "दि वार प्रोग्राम अफ दि पोलिटिकल रिवाल्यूशन" (१९१६)।
जुलाई, १९१७ मा क्रांतिविरोधिहरूका हाथमा सत्ता चली जानेमा बोलशेविक दलले आफ्नो नेताका अज्ञातवासको व्यवस्था गरे यसै सम त्यसले "दि स्टेट ऐंड रिवाल्यूशन" (राज तथा क्रांति) नामक पुस्तक लिखी र गुप्त रूपबाट दलका संघटन र क्रांतिको तैयारिहरूका निदेशनको कार्य जारी रखा। अक्टूबरमा विरोधिहरूको कामचलाऊ सरकारको तख्ता उलट दिइएको र ७ नोभेम्बर, १९१७ लाई लेनिनको अध्यक्षतामा सोभियत सरकारको स्थापना गरियो। प्रारंभबाट नैं सोभियत शासनले शांतिस्थापनामा बल देना शुरू गरे। जर्मनीका साथ त्यसले सन्धि गर ली; जमींदारहरूबाट भूमि छीनेर सारी भूसम्पत्तिमा राष्ट्रको स्वामित्व स्थापित गर दिइएको, व्यवसाहरू तथा कारखानहरूमा श्रमिकहरूको नियंत्रण भयो र बैकहरू तथा परिवहन साधनहरूको राष्ट्रीकरण गर दिइएको। श्रमिकहरू तथा कुन ानहरूलाई पूँजीपतिहरू र जमींदारहरूबाट छुटकारा मिल्यो र समस्त देशका निवासिहरूमा पूर्ण समता स्थापित गरियो। नवस्थापित सोभियत प्रजातंत्रको रक्षाका लागि रातो सेनाको निर्माण गरिएको। लेनिनले अब मजदूरहरू र कुन ानहरूका संसारका यस प्रथम राज्यका निर्माणको कार्य आफ्नो हाथमा लिया। त्यसले "दि इमीडिएट टास्क्स अफ दि सोभियत गवर्नमाट" तथा "दि प्रोले टेरियन रिवाल्यूशन ऐंड दि रेनीगेड कौत्स्की" नामक पुस्तकहरू लिखीं (१९१८)। लेनिनले बतलाया कि मजदूरहरूको अधिनायकतंत्र वास्तवमा अधिकांश जनताका लागि सच्चा लोकतन्त्र छ। त्यसका मुख्य काम दबाव वा जोर जबरदस्ती छैन वरन् संघटनात्मक तथा शिक्षण सम्बन्धी कार्य छ।
जहाँसम्म सोभियत शासनको विदेश नीतिको प्रश्न छ, लेनिनका अविकल रूपबाट शांति बनाई राख्नको निरंतर प्रयत्न गरे। त्यसले भन्यो कि "हाम्रो समस्त नीति र प्रचारको लक्ष्य यो हुनुपर्दछ कि चाहे केही पनि हो जाए, हाम्रो देशवासिहरूलाई युद्धको आगमा न झोंका जाए। लडाईको खात्मा गर देने ओर नैं हमा अग्रसर हुनुपर्दछ।" त्यसले साम्यवादका शत्रुहरूबाट देशको बचाव गर्नका लागि प्रतिरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनानेमा बल दिया र सोभियत नागरिकहरूबाट आग्रह गरे कि ती "वास्तविक" लोकतन्त्र तथा समाजवादका स्थापनार्थ विश्वका अन्य सबै देशहरूमा रहनेभएका श्रमिकहरूका साथ अन्तर्राष्ट्रिय बंधुत्वको भावना बढाने ओर अधिक ध्यान दहरू।
मुख्य लेख: अक्टोबर क्रान्ति
१९१७ अप्रिल ३ को राती दशक लामो आफ्नो निर्वासित जीवन त्याग्दै लेनिन रुसको पेट्रोगाड सहर फर्के । उनको स्वागत गर्न लालफन्डा बोकेका हजारौं श्रमिकहरु फिनल्यान्ड स्टेसनमा भेला भए । क्रान्तिकारी फौज र नौसेनाले गार्ड अफ अनर को व्यवस्था गरेको थियो । आफ्नो स्वागत गर्न भेला भएका जनसमूहबीच लेनिनले बोल्दै श्रमिक तथा नौसैनिकहरूलाई नयाँ सर्वहारा क्रान्ति र सोभियत सत्ता स्थापनाको लागि संघर्ष गर्न जोडदार आह्वान गरे ।
लेनिनले रुसको अस्थायी सरकारले पूँजीपति तथा बिर्तावालहरूको स्वार्थ रक्षार्थ काम गरिरहेको कुरा प्रस्ट पार्दै उसलाई असहयोग गर्न आमजनतालाई आह्वान गरे । साथै उनले ‘सम्पूर्ण सत्ता सोभियतहरूलाई’ भन्नेजस्ता नाराहरु अघि सारे । उनले स्पष्ट पार्दै सोभियत सत्ताले मात्र आमजनतालाई शान्ति, किसानहरूलाई जमिन, भोकाहरूलाई रोटी दिन सक्छ भने । उनले बिर्ताहरु बिना मुआब्जा जफत गरिनुपर्छ, देशको समस्त जमिनको राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ र सम्पूर्ण कलकारखाना सामाजिक उत्पादन तथा वाणिज्य व्यवस्थामाथि मजदुर नियन्त्रण कायम गर्ने प्रस्ताव राखे ।
यसैबीच लेनिनले महाधिवेशन डाकेर पार्टीको नाम बदलेर बोल्सेभिकबाट कम्युनिस्ट पार्टी बनाए। केरेन्स्कीको अस्थायी सरकारले लेनिन र बोल्सेभिकहरुविरुद्ध घृणा तथा दुष्टतापूर्ण आरोपहरु लगाउन थाल्यो । उनीहरूले लेनिनलाई गिरफ्तार गर्न पुर्जी काटे । लेनिनले करिब साढे तीन महिना भूमिगत भएर काम गरे ।
सन् १९१७ मा लेनिनले भूमिगत अवस्थामा लेखेको कृति ‘राज्य र क्रान्ति’ प्रकाशित भयो । त्यस पुस्तकबाट लेनिनले राज्यसत्तामा सर्वहारा अधिनायकत्व किन आवश्यक छ र यसको ऐतिहासिक भूमिका के हो भन्ने कुरा खुलस्त पारे । यस पुस्तकमा उनले समाजवाद र साम्यवादलाई साम्यवादी समाजको दुई खुड्किलाको रूपमा व्याख्या गरे । उनले क्रान्तिमा कम्युनिष्ट पार्टीको भूमिकाबारे पनि महत्त्वपूर्ण विचार प्रकट गरेका थिए । जनता बिस्तारै बोल्सेभिकहरुतर्फ ढल्कन थाले । सोभियतहरूको पुनःनिर्वाचनमा बोल्सेभिकहरूले बहुमत पाए । उनीहरूले पेट्रोग्राड र मास्कोका सोभियतहरूमाथि आफ्नो वियन्त्रण कायम गरे । सोभियतहरूको प्रतिष्ठा बढ्यो र उनीहरू फेरि प्रमुख शक्तिको रूपमा देखा परे । लेनिनले विद्रोहको लागि विस्तृत योजना तयार गरे । लेनिनको नेतृत्वमा पार्टी केन्द्रीय समितिले विद्रोहको तयारी गर्दै देशभर सुनियोजित क्रियाकलाप सुरु गर्यो ।
२४ अक्टोवरको दिन बेलुकीपख आफ्नो जीवनलाई खतरामा पार्दै पेट्रोग्राडका ती सुनसान सडक हुँदै लेनिन स्मोलिन आए र विद्रोहको प्रत्यक्ष नेतृत्व गर्न थाले । भोलिपल्ट २५ अक्टोबरमा पेट्रोग्राडका टेलिफोन, टेलिग्राफ तथा रेडियो स्टेसनका कार्यालयहरु, नेभा नदीका पुलहरु, रेल स्टेसन र राजधानीका अन्य मुख्यमुख्य अड्डामाथि विद्रोही मजदुर, सिपाही र नौसैनिकहरूले कब्जा गरे । त्यस्तै क्रान्तिकारी सेनाले आकस्मिक प्रहारद्वारा अस्थायी सरकारका मन्त्रीहरु बसेको शिशिरप्रासाद कब्जा गरे । त्यसपछि कम्युनिष्ट पार्टीले फेब्रुअरी क्रान्तिपछि गठित अस्थायी सरकारलाई अपदस्थ गरेको घोषणा गर्यो । र, लगतै लेनिनको नेतृत्वमा रुसमा सर्वहारावर्गको पहिलो सरकार गठन भयो, जसले समाजवादी शासन प्रणालीको स्थापना र विकासको लागि सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व भएको समाजवादी राज्यसत्ताको सुरुवात गर्यो । यो क्रान्ति नै अक्टोबर क्रान्तिको रूपमा विश्वप्रसिद्ध छ ।
लेनिन उपनाम कसरी रह्यो ?सम्पादन
निर्वासनबाट फर्केपछि लेनिन सन् १९०० भरि क्रान्तिकारी मजदुर पत्रिका अखिल रसियाली राजनीतिक पत्रिका प्रकाशनको तयारीमा लागे । मे १९०० मा पार्टी निर्माणको लागि पिटर्सवर्गको गोप्य भ्रमण गर्दा लेनिन गिरफ्तार भए, तर खानतलासीको क्रममा केही नभेटेपछि उनले छुटकारा पाए । जारशाही सरकार लेनिनलाई आफ्नो ठूलो शत्रु ठान्थ्यो । त्यसैले देशभित्र बस्ने अवस्था नभएपछि लेनिन १६ जुलाई १९०० मा जर्मनीतर्फ लागे । यही अवधिमा लेनिनले अखिल रसियाली क्रान्तिकारी पत्रिकाको रूपमा ‘इस्क्रा’ (फिलिङ्गो) को प्रकाशन प्रारम्भ गरे । लेनिन अखबारको मुटु थिए । यस पत्रिकामार्फत् उनले कसरी पार्टी गठन गर्नुपर्छ कसरी आम जनसमूहहरूलाई पार्टी कामतर्फ आकर्षित गर्ने हो भन्ने बारे लेखहरु प्रकाशित गरे । सन् १९०१ देखि भ्लादिमिर इल्यिचले आफ्ना केही लेखहरु लेनिन नामबाट छपाउन थाले ।‘इस्क्रा’ पत्रिकामा काम गर्दागर्दै लेनिनले साइबेरियाली नदी लेनाबाट आफ्नो उपनाम राखेका थिए ।
कडा परिश्रमको कारणले सन् १९१८ मा गोली लागेर भएको घाउ बल्झिँदा लेनिनको स्वास्थ्य निकै बिग्रिन गयो । सन् १९२१ को जाडोदेखि डाक्टरहरूको अनुरोधमा उनी अक्सर आराम र उपचारको लागि आफ्नो काम रोक्न बाध्य भए । सन् १९२४ मा उनको स्वास्थ्य झन् बिग्रियो । तर, अस्वस्थ भए पनि लेनिनले हरेक दिन सरकारी कामकाजको रेखदेख गर्न छाडेनन् । सोही वर्ष नोभेम्बरमा ग्लुखोभको कारखानाका मजदुरहरूको एक प्रतिनिधिमण्डलले गोर्की सहरमा लेनिनलाई भेट गर्यो । उनीहरूले १८ वटा चेरीका रुखहरु लेनिनलाई उपहारस्वरुप दिनको लागि लिएर आएका थिए । आत्मीय रूपमा भएको यस भेटघाटमा लेनिनलाई मजदुरहरूले महान् सोभियत संघको निर्माणमा उहाँले तयार पारेको विकासको रुपरेखा पूरा गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । प्रतिनिधि मण्डल फर्केपछि लेनिनले आधा रातसम्म ग्लुखोभ कारखानाका मजदुरहरूले पठाएको शुभकामना पत्र बारम्बार पढेर बसे । मजदुरहरूसँग यो उनको अन्तिम भेट थियो । सन् १९२४ जनवरी २१ मा बेलुकी छ बजेर ५० मिनेट जाँदा विश्व सर्वहारा आन्दोलनका महान् नेता र मार्क्सवादका सिर्जनात्मक प्रयोगकर्ता लेनिनको निधन भयो ।
विकिमिडिया कमन्समा भ्लादिमिर लेनिन सम्बन्धी अन्य सामग्रीहरू रहेका छन्।
भ्लादिमिर लेनिनको बारेमा विकिपिडियाका भातृ योजनाहरूमा खोज्नुहोस्:
भ्लादिमिर लेनिनको बारेमा वा गरिएका कार्यहरू (वर्ल्डक्याट श्रेणीमा) रहेको छ ।
Marx२Mao.org – Lenin Internet Library
The Personality and Power of Nikolai Lenin From Raymond Robins' Own Story by William Hard (१९२०)
TIME १००: V.I. Lenin by David Remnick, १३ April १९९८
Re: Lenin in color – high quality edition युट्युबमा हेर्नुहोस्
The Ghosts of Lenin Abound by The Moscow News Weekly, १५ January २००९
को कार्य Vladimir Ilyich Lenin गुथनबर्ग परियोजनामा
Noam Chomsky on Lenin, Trotsky, Socialism the Soviet Union (POLITICAL DISCOURSE series)
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=भ्लादिमिर_लेनिन&oldid=938179" बाट अनुप्रेषित
अन्तिम सम्पादन ११ अक्टोबर २०२०, ०६:४९
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक ०६:४९, ११ अक्टोबर २०२० मा परिवर्तन गरिएको थियो।